Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad leedahay qoys / Dugsi
Caruurta oo dhan xaq ayay u leeyihiin waxbarasho. Degmada ayay waajib ku tahayin la siiyo caruurtaada boos ah iskoolka. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa nooca qawaaniinta jirta iyo nooca taageero ee caruurtaadu heli karaan si ay iyagu u awoodaan inay tagaan iskoolka iswiidhishka.
Waajibka iskool dhigashada iyo xaqa waxbarasho
Waajibka iskool dhigashada ah waxay tahay in caruurtu ay dhigtaa iskoolka haddii aanay jirin sabab ansax ah in aanay sidan samayn.
Waajibka iskool dhigashada ee ilmahaagu waxay bilaabantaa xilli dugsiyeedka dayrta ee ilmahaagu buuxinayo lix sano, haddii ilmahaagu ka diiwaan gashanyahay ama laga diiwaan gelin doono degmo. Fasalka barbaarintu waa khasab. Xaaladaha qaarkood waa suurtagal in ilmahaagu toos u bilaabo dugsiga hoose, dugsiga hoose ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ama dugsi gaar ah. Waajibka iskool dhigashada badanaaba waxay socotaa xilli ah tobban sano.
Haddii ay jiraan sababo gaar ah maaha ansax waajibka iskool dhigashada ilaa iyo ka hor xilli dugsiyeedka dayrta ee sannadka markaasi ilmahaagu buuxinayo toddobo sano. Tani waxaa go'aamiya degmadaada ka dib marka adigu aad samayso codsiga ah in waajibka iskool dhigashada dib loo dhigo. Haddii waajibka iskool dhigashada dib loo dhigo waa in ilmahaaga lagu casuumo inuu dhigto dugsiga xanaanada.
Waajibka iskool dhigashada waxay u dhigantaa xaqa waxbarasho. Ilmahaagu wuxuu xaq u leeyahay waxbarashada nidaamyada iskool ee dugsiga xanaanada, fasalka barbaarinta, dugsiga hoose, dugsiga hoose ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay, dugsi gaar ah iyo hoyga xilli firaaqaha.
Ilmahaagu waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu bilaabo waxbarashada dugsiga sare ama dugsiga sare ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ilaa iyo nus sanadeedka ugu horeeya ee sannadka ilmahani buuxinayo 20 sano, haddii ilmuhu ka diiwaan gashanyahay ama laga diiwaan gelin doono gudaha degmo.
Halkan adigaaga waalidka ah ayaa ka akhrin kara dheeraad ku saabsan iskoolka Iswiidhan.
Ilmahaaga waa in uu bilaabaa dugsiga hoose-dhexe ama lagu soo casuumaa boos ah dugsiga sare sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagal ah.
Maaha khasab in la tago dugsiga sare. Dhinaca dugsiga sare waxaa ilmahaagu ku baran karaa barnaamijyada qaran ee kala duwan ama barnaamijka soo gelida. Dhinaca barnaamijyada qaran waxaa ka jira barnaamijyada u diyaarinta xirfad iyo barnaamijyada u diyaarinta jaamicada.
Si ilmahaagu u tegi karo barnaamijka u diyaarinta xirfad waxaa shuruud u ah in ilmuhu ku baasay iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah, ingiriisi, xisaab iyo shan maado oo dheeraad ah. Micnihii waxaa shuruud u ah ku baasida isu geyn sideed maado.
Haddii ilmahaagu aanu geli karin barnaamijyada qaran waxaa ilmuhu dhigan karaa mid ka mid ah barnaamijyada soo gelida. Barnaamijyada soo gelida way dabacsanyihiin markay noqoto xawaaraha waxbarasho, baahsanaanta iyo nuxurka. Barnaamijyadani waa inay xitaa ku waafaqsanaadaan ilmahaaga aqoontiisa hore iyo baahidiisa.
Fasalka sii diyaarinta waxaa ilmahaagu ku baranayaa maadooyin kala duwan iyadoo isla mar ahaantaas ilmuhu baranayo aasaaska luqada iswiidhishka. Hadafku in ilmahaagu hal ama dhowr maado ku barto fasalka sii diyaarinta waa in ilmahani sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah diyaar ugu noqdo la socodka waxbarashada fasalada caadiga ah.
Ilmahaaga ugu badnaan laba sanno ayaa la siin karaa waxbarashada fasalka sii diyaarinta. Ilmahaagu waxbarashadiisa oo dhan ma ku qaadan karo fasalkaas. Inta ay leegtahay qaybta waxbarasho ee ka dhacaysa fasalka sii diyaarinta iyo inta ay leegtahay qaybta waxbarasho ee ka dhacaysa fasalka caaadiga ah way ku kala duwanyihiin ilmo kastaba. Waa maamulaha iskoolkan qofka go'aaminaya sida waxbarashadan loo qorshaynayao.
Si ilmahaagu u heli karo wakhti dheeraad ah dhanka iswiidhishka waa in wakhti laga jaraa waxbarashada maadooyinka kale. Isu geynta wakhtiga waxbarasho isku mid ayay noqotaa, laakiin waa la qaybiyaaa wakhtiga waxbarasho si wakhti dheeraad ahi u noqdo dhinaca iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah. Waa maamulaha iskoolka qofka go'aaminaya haddii ilmo uu helayo qorshaha ahmiyada saacadaha. Ilmuhu wuxuu lahaan karaa qorshaha ahmiyada saacadaha ugu badaan hal sano.